Funda ukupheka amazambane kuhhavini. Ungadliwa for newbies hhayi kuphela
Amazambane amakhulu eminyaka iqhubeka ukuba ngomunye imikhiqizo ukhiye phezu kwetafula. Futhi akusiwona kuphela wentengo ezingabizi namaminerali eziqukethwe impande. Abaningi futhi uheha lenqwaba izitsha ezahlukene ukuthi ingalungiswa ngokuthatha ethandekayo umkhiqizo isisekelo. I nezilimo eziyizigaxa zalesi sitshalo simangaliso kungaba Fry, ubilise noma ukubhaka nge imikhiqizo ehlukahlukene amakhulu ezinkulungwane zokupheka. Lesi sihloko wethula umfundi yokuthi abantu, yiziphi izindlela ungakwazi ukupheka amazambane kuhhavini. Ungadliwa for wakhe olukhethiwe isimiso esifanayo - inkimbinkimbi ukulungiselela kanye nelinanincane lema-isikhathi ukwakha lezi yobuciko kancane Culinary.
Omunye ongakhetha esheshayo - kuyinto ukupheka chips kuhhavini. Ukuze wenze lokhu, thatha amazambane ezine naphakathi (ngalinye ekukhonzeni), nihlambulule ubageze bese uthathe izindandatho mncane. Beka emasongweni a napkin, ukuze zome kancane, futhi kulesi sikhathi kulungele kuhovini ezinhle baking amafutha, okuzokwenza yokosela amazambane, amafutha zemifino. Thina wayendlala anosawoti kahle futhi bafafazwe izinongo, amazambane "ikhekhe ukuxubana" bese uthumela it kuhhavini imizuzu eziyisikhombisa kuya kweziyishumi. Emva kwalesi sikhathi, thina Pheqa amazambane izindandatho ngakolunye uhlangothi bese uthumela it kuhhavini kuze kuphekwe.
Ngaphambi ukupheka amazambane kuhhavini, zokupheka yayo engase yehluke kakhulu komunye nomunye ngangokunokwenzeka kubalulekile ukucabanga okufunayo ukuze uthole dish kwasekuqaleni. I chips ngenhla echazwe Luhle kokubili njengoba dinner for iqembu labangane noma njengoba ukukhanya "isidlo." Enye indlela enhle ukuthi bangaba dinner esiphundu, futhi kushisa hors d'oeuvres - ke amazambane ne ubhekeni. Ukuze kuthathe amazambane ezinkulu, makaziphothule ubageze bese unciphe ngesigamu bese zisakazwa bhaka. On ngamunye uhhafu amazambane lokuvungula kwabathinta ucezu nalutho ubhekeni ngabhema. Ifanele njengoba ubhekeni okunosawoti, ngabhema kodwa ukunikeza isidlo flavour ezahlukene ngokuphelele. Kubalulekile ukuthi amanoni wawuyingxenye ungqimba ezinhle inyama. Sizothumela pan kuhhavini osuke usushisa kakade futhi ugcine khona kuze amazambane sekulungile. Sabe shift ke ngoqwembe esikhulu ukuhlobisa amakhambi fresh noshizi ogayiwe uhlanganise izinongo.
Kodwa indlela ukupheka amazambane kuhhavini, kuze sikhule size sibe dinner ngokugcwele? Ukuze wenze lokhu, kudingeka kuzosungulwa neminye imikhiqizo. Ngokwesibonelo, kungenzeka ukubhaka amazambane nge inkukhu imilenze.
Ngenxa yalesi sithatha imilenze emibili phakathi (okusekelwe izingxenye ezimbili) futhi ehlukana zaba izingxenye ezimbili noma ezintathu ngamunye. Hlanganisa esitsheni ezijulile imifino oqoshiwe, imayonnaise, vukuza on a indawo grater ushizi, nesweli oqoshiwe, usawoti kanye izinongo. Zenyama kufanele libekwe phezu bhaka, kokufumbathisa sauce ezinhle. amazambane unciphe ngesigamu sandwiched phakathi tincetu inyama futhi uthele sauce. Thina ubhake ukudla kwethu cishe ihora kuze kuphekwe.
Pheka amazambane kuhhavini (zokupheka izitsha ezifana Sekuyisikhathi eside kwaziwa umnikazi ngamunye) ungakwazi nge eziningi imikhiqizo, ezisukela inyama, imifino kanye amakhowe, ziphethe kwasolwandle futhi izithelo ezingavamile. Into esemqoka ukukhumbula ukuthi amazambane ngokwayo impela into eyanelisayo. Ngakho uma uhlela ukupheka ukudla kwakusihlwa, kuhlanganise amazambane kuhhavini, zokupheka, zama ukukhetha labo abangahambi overload esiswini ngesikhathi sokulala. Ngesikhathi sokudla kwasemini, kunalokho, ngeke asondele okuningana okunomsoco futhi okunama-kilojoule amaningi izitsha - yenkomo sikadali, amazambane kanye nenyama yengulube noma imvu ongakhetha efanayo.
Ungayithathi kalula isidlo amazambane - umkhiqizo zenani Inca lasendulo selokhu wesintu, futhi okhokho bethu ukuthi kuningi ukudla okwehla esiphundu futhi unempilo. Ngakho ake abalandela isibonelo sabo futhi ulungiselela santambama kulobusuku banamuhla isidlo langa kwalo mkhiqizo esihlwabusayo futhi unempilo!
Iresiphi elula for sitrobheli jamu
Amabutho Nuclear Russia US
Catalytic yokuhlanza Ohhavini. Incazelo yenqubo
Imiqulu Cute crab izinti